Aka ndị uweojii akparala ndị gburu ụkọchukwu Enugwu | odumblog
posted on Aug. 17, 2019 at 8:33 am
Aka ndị uweojii Enugwu steeti akparala ndị a na-enyo enyo na aka ha dị n’ọnwụ ụkọchukwu Chọọchị Katọlik dị n’Enugwu, Rev. Fr. E Paul Offu, ndị uwe na Fraịde.
Dịka ndị daily DAILY POST siri kwuputa, onye kọmishọna ndị uwe ojii n’ Enugu steeti, CP Suleiman Balarabe kwupụtara nke a n’oge a na-eme mkparịta ụka n’ isi ụlọọrụ ndị uweojii n’Enugwu.
Ndị uwe ojii ahụ wepụtara mmadụ 30 a na-enyo enyo, gụnyere ndị gburu Fr. Offu, onye ụkochukwu ụlọụka nke St James Catholic Church, Ugboka, na ndị tọọrọ onye isi ọdịnala nke Obum-Agbogwuwu, His Royal Highness, Igwe Sunday Orji na nwunye ya, na ncherikọta ihu okporoụzọ Agbogwugwu na Ihe n’ọgọst 4, 2019.
Ndị e gosipụtara dị ka ndị a na-enyo enyo bụ Ibrahim Adamu, (afọ 25) si Taraba State na Idris, (afọ 28), na atọ ndị ọzọ ka nọ na nnukwu.
Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, otu n’ime ndị ahụ a na-enyo enyo, Ibrahim Adamu kwuru na ọ bịara Enugu ịmụ maka ọrụ ịzụ ehi mana na site ebe ahụ, o sonyeere ndị otu ahụ.
O kwuputara na onye otu ya e jidere ha abụọ bụ Idris, na-enye ha nri.
Ndị uwe ojii gosipụtakwara ndị gburu Rev. Fr. Clement Rapuluchukwu, onye ụkochukwu ụlọụka St Mary Katọlik, Obunofia Ndiuno dị n’ Ezeagu LGA na Machị 14, 2019.
Ndị a gụnyere Sunday Chibuko gbara afọ iri atọ na atọ si n’ Ezeagu LGA, Benjamin Osondu, afọ 28, si Udenu LGA na Wasiu Ajomale si Ogun steeti a nwụchiri na Abuja, Lagos na Ogun steeti n’otu n’otu. Onye nke anọ a na-enyo enyo, kelechi, si Oji-River.
Ndị a na-enyo enyo kwuputara igbu onye ụkọchukwu ahụ mgbe ha chụpụrụ ya n’ụlọ ọ gbagara maka mkpuchi.
Tupu ha egbuo onye ụkọchukwu ahụ, ha kpọgara ya na igwe ndọrọ ego ma wekọrọ ego ya, were zụtara Malt ọ ṅụrụ tupu ya anwụọ n’ihi egbe ha gbara ya n’ụkwụ.
Tags:BBCBBC Igbobbc newsBIAFRAbreaking newsBuharicatholic priestChannelsDaily postDeathEnugu Police commandEnugu stateFULANI HERDSMENHerdsmenIgboIgbo blogIgbo NewsIgbo songsLatest newsNaija celebritiesNGA vs SOUTH AFRICANigeriaOdumblogOdumblog newspolicePolitics NigeriaRUGASahara Reporters